Ikhaya / Blog / Ungawashintsha kanjani ompompi basekhishini?
2020 / 11 / 09 UkwahlukanisaBlog 5865 0
Noma ngabe ushintsha noma ufaka ompompi basekhishini, kufanele uhambe ngezinqubo ezifanayo. Yize ukufaka umpompi wasekhishini ngandlela thile kulula kunokufaka esikhundleni sawo. Kepha, ukufaka esikhundleni sompompi wasekhishini nakho akunzima kangako uma wazi amasu.
Ukuze ube nokubukeka kwesimanje, kufanele ushintshe izesekeli zakho zasekhishini ngokuya ngomkhuba. Yilokho abantu abakwenzayo kulezi zinsuku. Umpompi wasekhishini ubuye ube isesekeli esihlala njalo esithuthukiswayo futhi esihlala isikhathi eside. Ikakhulukazi i- umpompi wokuxuba onesaphulelo okuhlala cishe iminyaka engu-5-10.
Manje, ungayifaka kanjani esikhundleni sompompi wakho nge-matte black donsa phansi ompompi basekhishini? Kulesi sihloko, senze umhlahlandlela ofanele wokufaka isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu lakho lasekhishini. Ake siqale nje!
Ungayifaka kanjani indawo yompompi wasekhishini nge-sprayer
Ukushintsha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kuwumsebenzi obalulekile wokuthuthukisa ikhaya. Kujwayelekile kepha kunzima kubasebenzisi abaningi basekhishini, ikakhulukazi kwabangenalwazi. Iqiniso ukuthi, ukufaka esikhundleni sepayipi elimnyama lokudonsa phansi ompompi basekhishini akunzima kangako njengoba kubonakala.
Ake sikuholele enqubweni yokufaka isikulufa ompompi ekhishini ngesifutho.
Isinyathelo 1: Lungiselela
Umpompi ombili noma abathathu ngeke usebenze kusinki womgodi owodwa. Kepha, umpompi womgodi owodwa usebenza kahle kusinki enemigodi emibili. Ngaphambi kokufakwa, iya ngaphansi kukasinki wakho bese ubheka ukuthi mingaki imbobo ekhona. Letha umpompi wasekhishini ngokususelwa emgodini wosinki wakho.
Isinyathelo 2: Vala amanzi
Kufanele ngabe ukhethe ukuthi iyiphi impompi ozoyifaka? Manje, cisha ukunikezwa kwamanzi kuma-valve ngaphansi kosinki. Uma engekho ama-valve, kufanele uvale wonke amanzi endlini.
Isinyathelo 3: Khipha izintambo zokuhambisa amanzi.
Nqamula ulayini wokuhambisa amanzi kusuka ompompi ngokusebenzisa isikrufu esishintshayo. Izokusindisa ekucindezelweni kwamanzi ngenkathi ushintsha ompompi. Lapho ukhipha izintambo ezintanjeni, qinisa ipayipi likasinki ngaphansi kwekhabethe.
Lesi senzo sizosusa konke ukuphazamiseka endleleni yolayini wokuhambisa amanzi. Ngenxa yalokho, amanzi angangena kalula kulayini wokuphakela.
Isinyathelo 4: Khulula amantongomane esinki ukuze ususe ompompi
Isikhathi sokususa umpompi wakho wakudala. Ngakho-ke, khulula amantongomane ekhishi lakho laphansi ngaphansi kwekhabethe ngesihlakala. Manje, phakamisa kancane umpompi wakho wakudala ekuxhumaneni nosinki. Bese uhlanza imfucumfucu nokungcola ebusweni besitsha sakho.
Isinyathelo 5: Hlanganisa izingcezu zompompi
Hlanganisa izingcezu zompompi ngephuzu lokuxhuma kusinki wasekhishini. Landela imiyalo esephaketheni. Kungakhathaliseki ukuthi ompompi abaphatha isibambo esisodwa noma ompompi abanezibambo ezimbili, imiyalo engaphezulu kwephakethe izokukhombisa indlela efanele yokuyibeka.
Isinyathelo 6: Faka ompompi emgodini wosinki
Ngemuva kokunamathisela izingcezu zompompi nezixhumi, qinisa ukuxhumana nesihlakala esishintshwayo. Ngemuva kwalokho, faka ompompi emgodini kasinki kahle.
Faka isifutho emlonyeni wompompi wasekhishini. Qinisa isifutho ngompompi kanye nombhobho ngephuzu elifakiwe kusinki.
Isinyathelo 7: Xhuma kabusha ulayini wokuhambisa amanzi.
Ekugcineni, ufake umpompi wasekhishini kusinki yakho. Manje, sekuyisikhathi sokuxhuma kabusha ulayini wokuphakelwa kwamanzi. Xhuma ulayini wokuhambisa amanzi nesikrufu esishintshekayo bese uvula amanzi.
Isinyathelo 8: Bheka ukuvuza nokucindezela kwamanzi
Kufanele ushaye ompompi ngokushesha ngemuva kokufakwa bese uhlola ukuthi akukho yini ukuvuza. Qinisa isikulufu sephoyinti lokuxhuma uma kukhona ukuvuza noma ukuphazamiseka kokutholakala kwamanzi.
Khumbula, ukuhlola isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ngemuva kokufakwa kuyindlela kodwa umsebenzi obalulekile okufanele wenziwe.
Isinyathelo 9: Hlanza usinki
Ngemuva kokufaka esikhundleni sompompi, uzothola imfucumfucu kusinki. Hlanza usinki ngaphambi kokusebenzisa ompompi.
Ingabe kunzima kakhulu ukufaka ipayipi kusinki yakho ekhishini? Cha? Ngemuva kwalokho, ulindeni? Vele ulandele imihlahlandlela yethu bese ushintsha ompompi wakudala wekhishi lakho ngaphandle kosizo.
Noma upheka noma ugeza izinto zasekhishini, kufanele ube nompompi onamandla wasekhishini. Umpompi onamandla wasekhishini umpompi ohlinzeka ukugeleza okuphezulu kwamanzi. Umpompi wakudala osekhishini awunakunikeza amanzi owafunayo.
Kungakho kubalulekile ukuthi ufake okusha ompompi bakho basekhishini. Ukuthola isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ekhishini, sincoma ukuthi ukhethe i- umpompi wokuxuba onesaphulelo. Kungani? Lokho kungenxa yokuthi, kungenye yezinkinobho ezinamandla zekhishi eza nenqubo yokufaka elula. Sethemba, imihlahlandlela yethu izokuholela ukuthi ubeke esikhundleni sompompi wakho omdala ngaphandle kwephutha.
Buyisela umpompi wakho wasekhishini wakudala nokupheka okujabulisayo.
Edlule :: Kungani i-Right Kitchen Faucet Yenza Umehluko Olandelayo: Uyini Umkhiqizo Ohamba Phambili Wompompi Wekhishi?
2021 / 01 / 11 3228